January 16, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 16, 2020
(Manchester) 16 Jan 2020. Indhaha taageerayaasha horyaalka Premier League ayaa waxay ku sii jeedaan kulanka weyn ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Liverpool iyo Manchester United garoonka Anfield Axada soo socota, kaasoo ka tirsan kulamada 23-aad Premier League ee xilli ciyaareedkan. Haddaba Kabtankii hore kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa fariin uu ku soo Sii akhriso
(Milan) 16 Jan 2020. Weeraryahanka reer Argentina iyo kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Lautaro Martínez, ayaa ka hadlay xiisaha ay Barcelona u qabto adeegiisa. 22-jirkan ayaa si aad ah kaga soo muuqday kooxda Inter Milan xilli ciyaareedkan, wuxuuna ku guuleystay inuu dhaliyo 15 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 3 kale, 24 kulan uu ciyaaray tartamada […]Sii akhriso
Waa sidee wax qabadka xiddigaha Salah, Mané iyo Firmino kulamada ay la ciyaareen kooxaha waaweyn ee Premier League xilli ciyaareedkan?
(Liverpool) 16 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa isku diyaarineysa kulanka adag ee la wada sugayo ay naadiga Manchester United ku wada ciyaari doonaan Axada soo socota horyaalka Premier League. Haddaba waxaan warbixintan ku eegi doonaa wax qabadka saddexda xiddig weerarka kaga ciyaarta Liverpool ee Salah, Mané iyo Firmino kulamada ay la ciyaareen kooxaha Sii akhriso
(Manchester) 16 Jan 2020. Manchester United ayaa u soo baxday wareega afaraad ee koobka FA Cup, kaddib markii ay ka reebtay kooxda Wolverhampton oo ay kaga adkaatay 1-0, kaddib kulan xiiso badan oo ay ku wada ciyaareen garoonka Old Trafford. Macalinka reer Norway iyo kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ku soo bilaawday kulankii […]Sii akhriso
Shaqooyinka January 16, 2020
Organization: International Organization for Migration Country: Ethiopia Closing date: 31 Jan 2020 Call for Application Vacancy No. IOM-CFA/0005/2020 Position Title: Consultant – Migration Data Duty Station: Home based and Addis Ababa, Ethiopia Classification: Consultant Closing Date: January 31, 2020 1. BACKGROUND 1. The Africa Regional Migration Programme (ARMP) The Sii akhriso
(Manchester) 16 Jan 2020. Manchester United ayaa muddo dheer lala xiriirinayay inay u dhaqaaqdo daafaca kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly, sidoo kale waxa ay kooxda ku raad joogtaa dhowr xiddig oo ay kusoo xoojin karaan safkooxda suuq yadda bilaha janaayo iyo june Mancehester United ayaa waxay diyaar u tahay inay bixiso lacag dhan 64 milyan ginni […]Sii akhriso
Ethiopia News January 16, 2020
Ethiopia Plans to Build Africa’s Largest Airport at $5 Billion BloombergSii akhriso
Heegan oo guul ka gaartay Kooxda Jazeero kulan ka tirsanaa horyaalka Somali Premier League
(Muqdisho) 16 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta ee Heegan ayaa galabta guul ka gaartay naadiga Jazeero Sports Club, Kadib markii ay kaga adkaatay 2-1, ciyaar qeyb ka aheyd horyaalka Somali Premier League. Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan, waxaa u soo daawasho tagay taageerayaal faro badan oo kala taageersan labada kooxood. Kooxda Heegan waxay […]Sii akhriso
Duqa Muqdisho oo dhagax dhigay xarun caafimaad oo laga hirgelinayo Kaxda “SAWIRRO”
Soomaaliya January 16, 2020
Muqdisho (SONNA) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa dhagax dhigay mashruuc Degmada Kaxda oo lagu dhisayo xarun Caafimaad oo bulshada si bilaash loogu adeego. Mashruucan ayaa qeyb ka ah mid lagu hirgalinaayo goob waxbarasho oo carruurta si lacag la’aan ah wax ugu bartaan iyo sidoo kale […]Sii akhriso
Mas’uuliyiinta Dowladda Hoose ee Gaalkacyo oo soo bandhigay shaqaale iyo gaari kuwa gurmadka deg dega ah “SAWIRRO”
Gaalkacyo (SONNA) – Mas’uuliyiinta Dowladda Hoose ee magaalada Gaalkacyo ayaa dadaallo xooggan ku bixiyay sidii Gaalkacyo ay u heli lahayd Gaadiidka dab damiska oo ay baahi weyn u qabeen dadka magaaladaasi. Maanta ayay soo bandhigeen Gaari Dab damis ah iyo shaqaale loo carbiyay Gurmadka Deg Dega ah, kuwaas oo maamulku uu diyaariyay. Marar badan magaalada […]Sii akhriso